မျှော်လင့် နေဆဲဘဲ: လွတ်လွတ်လပ်လပ် မစားဖို့ လိုနေပြီ
လွတ်လွတ်လပ်လပ် မစားဖို့ လိုနေပြီ
ဒီဇင်္ဘာလ ၂၆ ၇က်နေ.က နေပြည်တော်တွင်၊ cabinet အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ.သည်။ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် မိန်.ခွန်းပြောကြားခဲ.ကြောင်း အင်တာနက် ဧ၇ာဝတီသတင်း စာစောင် နှင်. Betweenonline သတင်းများတွင်၊အသီးသီးဖော်ပြပါရှိပေသည်။ သမ္မတကြီး၏ မိန်.ခွန်း ထဲတွင်၊ တတိယမြောက် လုပ်ဆောင်သွားမဲ. ဦးတည်ချက် ကတော. နိုင်ငံတော် အစိုး၇ အမှု. ထမ်းများ၊ ဌာနဆိုင်၇ာတို.မှာ ဖြစ်ပေါ်နေသည်.၊ အဂတိ လိုက်စားမှု.၊ လဒ်ပေးလဒ် ယူမှု. များကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြီး၊ ပပျောက်သွား၇န် ကြိုးစား လုပ်ကိုင်သွားမည် ဆိုသောအချက်ကို ပြောကြား သွားပါသည်။ ၄င်းမိန်.ခွန်းကို မြန်မာ. ရုပ်မြင်သံကြားကေ၇ာ၊ေ၇ဒီယို လေလှိုင်း ထုတ်လွှင်. မှုများတို.ကပါ၊ ပြည်သူ တ၇ပ်လုံး နှင်.သက်ဆိုင်၇ာ ဌာနများ၊ အလုပ်အမှု.ထမ်းများ အားလုံး သိရှိကြစေ ၇န်၊ အသိပေးခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ခန်.မှန်းနိုင်ပါသည်။
သမ္မတကြီး၏ မိန်.ခွန်းပြောကြားချက်တွင်၊ ယခုအချိန်အထိ၊ ဌာနများတွင် လဒ်ပေး လဒ်ယူမှု. များ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြပြီး၊ ၄င်းတို.ကို တားဆီး ၇ပ်တန်.ကြ ၇တော. မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်မှု. နှင်. ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု. အထွေထွေ အ၇ပ်၇ပ်တို. အတွက်၊ နှောင်.နှေး မှု.များဖြစ်စေပြီး၊ ဝန်ထမ်းများသည် collaboration အတူတကွ ပူးပေါင်းပါဝင်ကာ၊ နိုင်ငံတော်၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲေ၇းများကို၊ ကောင်းမြတ်သောအာဏာ ပိုင်တို.၏ ထားရှိအပ်သော ထိမ်းသိမ်းမှု. တာဝန် နှင်.ဝတ္တ၇ား (good governance) တို.နှင်.အညီ ဆောင်ရွက်သွားကြဖို. အားထုတ်ကြ ၇မည်ဖြစ်ကြောင်း တို.ပါဝင်ခဲ.သည်။
ပဌမဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ဖြစ်ကြသည်.၊ နိုင်ငံေ၇းတည်ငြိမ်မှု.နှင်. ပြန်လည်စုစီးေ၇း နှင်. ၇င်ကြားစေ.စပ်ေ၇း လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ခဲ.သည်။ ဒုတိယဦးစားပေးအဖြစ် နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားေ၇း တိုး တက်မှု.၊ ပြန်လည် reforms လုပ်ေ၇းများလုပ်ကိုင်ခဲ.ပြီဖြစ်သည်။ ယခုအခါ မြန်မာ နိုင်ငံတော်အတွင်း ဌာနဆိုင်၇ာတို.အားလုံးကို grassroots to the union levels အောက်ခြေသိမ်းကနေ အထက်ပိုင်းတို.အထိ ပြုပြင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပါရှိပေသည်။
အဆိုပါသတင်းကို ဖတ်မှတ်လေ.လာပြီးသောအခါတွင်၊ ဝမ်းသာကြည်နူးမိသလို ကျနော်. ၇င်ဝယ် မေးခွန်းကလေး များ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ.တော.သည်။ ယခုကဲ.သို. သမ္မတကြီး ကိုယ်တိုင်က၊ လေ.လာ တွေ.သိပြီး၊ “ပျက်အစဉ် ပြင်ခန” ဆိုသလို၊ ဖရိုဖယဲဖြစ်နေခဲ.သော၊ အချို.ဌာနဆိုင်၇ာများကို စံနစ်တကျ၊ မှန်မှန်ကန်ကန် မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဖြစ်အောင် ပံ.ပိုးပေး ခြင်းသည်၊ မည်သည်.အစိုး၇လက် ထက် ကမှ၊ ထုတ်ဖော်မပြောဆိုခဲ.သော စကား၇ပ် တစ်ခုဖြစ်ပါ သဖြင်.၊ လေးစားဂုဏ်ယူမိပါသည်။ သို.ပါသော်လည်း၊ မေးခွန်းများကတော. အမြဲရှိနေ ကြဦးမည် ဖြစ်ပါသည်။
“Corruption” ကို ကိုင်တွယ်တော.မည် ဆိုသောစကားတွင်၊ မည်ကဲ.သို. ကိုင် တွယ်ဖြေရှင်း သွားမည်ကို အတိအကျသိခွင်.မ၇ခဲ.တာအမှန်ဖြစ်သည်။ လူထုကြီး အနေနှင်. သိလို ပါဦးမည်။ လူထုကြီးသိဖို.လိုပါလိမ်.မည်။ မည်ကဲ့သို.သော နည်းလမ်းများကို အသုံးချကာ၊ စုံစမ်းထောက်လှမ်း ရှာဖွေ ဖော် ထုတ်မည် ဆိုသည်ကိုလည်း သိခွင်.မ၇ကြသေးပါ။ ၄င်းအားလည်း၊ လူထုကြီးသိထား သင်.ပါသည်။
Photo: President Website
ကျနော်.အတွေအကြုံကလေးများကို လူထုကြီးနှင်. မျှဝေခံစား (share )၇မည်ဆိုပါလျှင်၊ ဌာနဆိုင်၇ာ အဆင်.ဆင်.တို.သည်၊ ဆင်.ကဲဆင်.ကဲ ၇ံပုံငွေ ကောက်ခံခြင်းကိစ္စ၇ပ်များ ယခင် တိုင်းကောင်စီ၊ မြို.နယ်ကောင်စီ နှင်. ၇ပ်ကွက်ကောင်စီတို.ရှိစဉ်ကပင်၊ ငွေဖလားကြီးများ စားပွဲ ပေါ်တွင်ချထားကာ၊ အလုပ်တခု သွားလုပ်ခိုင်းတိုင်း၊ ၇ံပုံငွေထည်.ခိုင်းသည်. ဖြစ်၇ပ်များရှိခဲ. သည်။ ၇ပ်ကွက်ကပြောတော.၊ အထက်က စာရွက်စားတမ်းကြေး၊ ရုံးသုံးစာေ၇းကိ၇ိယာများ ဝယ်ယူကြ၇န်အတွက်၊ ငွေကြေးကို၊ ဖာသာရှာဖွေကြ ၇မည်ဖြစ် ကြောင်း၊ ညွှန်ကြားထား သည်ဟု၊ ၇ပ်ကွက်ရုံးက ပြောဆိုပြီး၊ တောင်းခံပါသည်။ ထိုနည်းတူစွာပင်၊ ဗဟိုကနေ တိုင်း နှင်. မြို.နယ်အသီးသီး၊ မြို.နယ်အသီးသီးကနေ၊ ၇ပ်ကွက် အစရှိသဖြင်.၊ အခမဲ.တောင်းခံ တတ် သောအကျင်.များကို ဌာနဆိုင်၇ာတို.က၊ စတင်လုပ်လာကြ၇ာမှ၊ corruption ဇာတ်လမ်း အစပြုခဲ.ခြင်းလို. ကျနော်စဉ်းစားမိခဲ.ပါသည်။
လဒ်ပေးခြင်း ပုံစုံအမျိုးမျိုး၊ နည်းအမျိုးမျိုးရှိတတ်သည်။ ယခုအခါ ပိုမိုပြီး အဆင်.မြင်.သော နည်းများကို သုံးနေကြပြီ ဖြစ်သည်။ ယခင်ခေတ် ယခင်အခါက၊ ခတ်ပြောင်ပြောင် တောင်း တတ်ကြသည်။ ယခုခါတွင်၊ အေဂျင်စီများ၊ အမှုပွဲစားများ တိုးတက်များပြားလာသဖြင်.၊ ၄င်းတို. မှတဆင်. (under the table ) အပေးအယူပြုကြကြောင်း သိရှိ၇ပေသည်။ အချို.ဌာနများ မှာမူ၊ ၇လာသော ငွေကြေး များအားလုံး စုဆောင်းထာပြီး၊ တနေ.၊ တပတ်၊ တလ အစရှိသဖြင်.၊ အားလုံး ညီတူ၊ မျှတူ ခွဲဝေ ကြသည်။ လဒ်စားသည်.နေ၇ာတွင် Team-work ဟုဆို၇ပေမည်။
ထိုကဲ.သို. လဒ်စားနေသောအမှု.ထမ်းများကို မည်ကဲ.သို. ဖော်ထုတ်မည် ဆိုသည်.နေ၇ာတွင်၊ လူထု၏ ကူညီပံ.ပိုးမှု.သည် အေ၇းပါသောကဏ္ဍဖြစ်သည်။ လူထုကြီးသာလျှင်၊ လဒ်စားနေ သောအမှု.ထမ်းကို ဖော်ထုတ်နိုင်ပေမည်။ အခြားနည်းများမှာကား၊ ရုံးများတွင် လျှို.ဝှက်ကင် မ၇ာ ( detective camera ) များထားရှိခြင်း၊ private company များအားငှား၇မ်းပြီး၊ သီးသန်. ထောက်လှမ်းသော လုပ်ငန်းများ၊ လူထု၏ အတွေ.အကြုံများကို လိုက်လံမေးမြန်းပြီး၊ အခက်အခဲများအား ပြန်လည်ရှာဖွေ ဖေါ်ထုတ်ပေးခြင်း များတို. ကိုလည်း လုပ်နိုင်ပေသည်။ လဒ်ပေးသူေ၇ာ လက်ခံသူတို.ကိုပါ ပြင်းပြင်းထန်ထန် အေ၇းယူပေးခြင်းသည်လည်း၊ နောက် နောင်တွင် လဒ်ပေးလဒ်ယူအားပေးခြင်းမှ ရှောင်ရှား နိုင်ကြတော.မည်။
ဌာနဆိုင်၇ာများသို. သွားေ၇ာက်ပြီး၊ ရုံးကိစ္စများ လုပ်ကိုင်၇ာတွင်၊ အကြောင်းမဲ. အချိန်ဆွဲနေခြင်း၊ သပ်မှတ်ထားသော၇က်ထက်ပို ကြန်.ကြာအောင်ဖန်တီးနေခြင်း၊ ပိုက်ဆံ မပေး မချင်းထိန်ချံထားခြင်း အစရှိသည်တို.ကို တွေ.ကြုံလာသော လူထုကြီးအနေဖြင်.၊ ပိုက်ဆံ မပေး ပဲ၊ သမ္မတကြီးထံ လိပ်မူပြီး တိုင်ကြားသင်.သည်။ မိတ္တူကို သက်ဆိုင်၇ာ ဌာနမှ တာဝန်ရှိ သော အုပ်ချုပ်ေ၇းမှူးအား ပေးပို.၇ပေမည်။ လဒ်တောင်းခံနေသောရုံးအား အရှက်တကွဲ အကျိုးနဲဖြစ်စေ၇န် နှင်. လူထုကြီးသိစေ၇န် ဆန္ဒပြသော ကိစ္စ၇ပ်များ ရုံးရှေ.တွင်ပြု သင်.သည်။ အချို.မှာမူ အမြန်၇လိုဇောဖြင်.၊ တောင်းသ လောက် ပေးနေကြတတ်သဖြင်.၊ အမှုထမ်းများ အကျင်.စာ၇ိတ္တပျက်ပြားလာအောင် အားပေး အားမြောက် ပြုသလိုဖြစ်နေတော.သည်။ သိုဖြစ်၇ာ လဒ်ပေးသူေ၇ာ၊ လဒ်ယူသူေ၇ာ မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ၇န်သူများဟု ဆိုနိုင်တော.သည်။ အတွင်းမှ လှိုက်စားနေသော အကျင်.စာ၇ိတ္တပျက်ပြားမှု.တို.ကြောင်.၊ နိူင်ငံတော်၏ ဂုဏ်သိက္ခာ ပျက်ပြားမှု. ကမ္ဘာတွင် ထင်ထင်ရှားရှား ဖြစ်နေသည်သာမက၊ ဆက်လက် လျှောက် လှမ်းကြ ၇မည်. ဒီမိုကေ၇စီလမ်းအတွက်၊ corruption သည်၊ အင်မတန်မှ ကြီးလေးသော ဆူးညောင်. ခလုတ်ဖြစ်နေပါကြောင်း အသိပေးေ၇းသားလိုက်၇ပါသည်။ ။
Posted by Mr Htay Tint at 10:37 PM
နှလုံးသားထဲက နာကျင်လွန်းလို့ 